19-Ka November Maanta Oo Kale Maxaa Dunida Soo Maray? | FooreNews
Home Barnaamijo 19-Ka November Maanta Oo Kale Maxaa Dunida Soo Maray?
19-Ka November Maanta Oo Kale Maxaa Dunida Soo Maray?
FoorenewsNov 19, 2015Barnaamijo, Sheekooyin, wararka0
19-kii November 636 maanta oo kale waa maalintii uu soo dhammaaday dagaalkii kululaa ee dhex maray muslimiinta iyo gaalada ee ku caan baxay ‘Macrakatul Qaadisiya’, waana dagaalkii ay Muslimiintu ku jabiyeen Gaaladii Faarisiyiinta.
19-kii November 1493-kii, maanta oo kale waa maalintii Bad-mareenkii caanka ahaa ee Christopher Columbus uu ka degay oo helay Jasiiradda caanka ah ee Puerto Rico oo ka mid ah jasiiradaha Caribbean.
19-kii November 1942-kii waa maalintii Ciidankii Soofiyeetka ee loo yaqaanay Geeshka Cas ee uu hogaaminayey Jenaraal George Geckov ay bilaabeen hawl-galkoodii caanka ahaa ee Uranus oo ahayd dhimbiishii hurisay dagaalkii adkaa ee Stalingrad
19-kii November 1943-kii, maanta oo kale, waa maalintii ay Naasiyiintii Ruushku bilaabeen in ay isir sifayn ku sameeyaan Yuhuuddii deganayd Galbeedka Dalka Ukraine, halkaasi oo ay Naasiyiintu ku dileen in ka badan 6000 oo Yuhuudi.
19-kii November 1946-kii maanta oo kale waa maalintii ay dalalka Afghanistan, Iceland iyo Sweden ay si rasmi ah uga mid noqdeen Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa.
19-kii November 1954-kii waa maalintii ugu horraysay ee uu hawada soo galo Telefishan la iska arkaa qaaradda Yurub, waxaana uu ahaa Telefishanka Monte Carlo oo uu aasaasay Amiir Rainier kii saddexaad. Waxa uu telefishankaasi noqday kii ugu horreeyey ee lag hir geliyo goob Yurub ku taalla.
19-kii November 1977-kii maanta oo kale, waa maalintii Madaxweynihii wadanka Masar Maxamed Anwar Al-saadaat uu booqashada lama filaanka ah kaga degay wadanka Israel, isaga oo halkaasi ka jeediyey khudbad uu ka hor akhriyey Golaha Baarlamaanka Yuhuudda ee loo yaqaano Knesset.
19-kii November 1979-kii maanta oo kale waa maalintii Hogaamiyihii ruuxiga ahaa ee Al-khumeyni uu ooda ka qaaday ee uu sii daayey dhammaan dadkii ku xannibnaa safaaraddii Maraykanka ee Tehran ku taallay, kuwaasi oo dhalasho ahaan ka soo jeeday dalal Afrikaan ah waana sannadkii uu dalkaasi kacaanka islaamiga ahi ka curtay.
19-kii November 1990-kii maanta oo kale waa maalintii uu xukunka dalka Bosnia qabsaday Madaxweynihii islaamiga ahaa ee Ali izzat begovich, oo ahaa hogaamiye sumcad weyn dunida islaamka ku lahaa.
19-kii November 1993-kii, waxa xukun daldalaad ah lagu fuliyey Haweenay dhallinyaro ah oo u dhalatay wadanka Urdun taasi oo da’deedu ahayd 26-jir kadib markii ay saygeedii qudha ka jartay iyada oo inta ay garaacday kadibna dab qabadsiisay, waxaana maalintaasi hir galay xukunkii dilka ahaa ee ugu horreeyey ee dalka Urdun haweenay lagaga fuliyo.
19-kii November 1998-kii maanta oo kale, waa maalintii ay fadhigoodii ugu horreeyey yeesheen guddi-hoosaadka garsoorka ee Golaha Wakiilada Maraykanku iyaga oo ka arrinsanaya fadeexaddii lagu soo eedeeyey Madaxweynihii dalka Maraykanka ee wakhtigaasi Bill Clinton iyo haweenaydii lagu fadeexadeeyey Monica Samille Lewinsky.
19-kii November 2011-kii maanta oo kale, waxa wadanka Libya gacanta lagu dhigay wiilkii uu dhalay Hogaamiye Mucammar Al Qaddaafi ee lagu magacaabo Sayful Islaam Al Qaddaafi kaasi oo baxsad ku jiray kadib markii aabihii xukunka laga tuuray.
19-kii November 1882-kii maanta oo kale waa maalintii uu dhashay Cizaddiin Al Qassaam oo ahaa Mujaahid reer Falastiin ah waana hogaamiyaha loogu magac daray garabka Millatari ee kooxda Xamaas.
19-ka November sannad walba dunida waxa laga xusaa Xuska maalinta Ragga oo ah maalin qaramada midoobay u astaysay in laga hadlo arrimaha ragga balse waxa maalintan qarisay xuska maalinta haweenka adduunka ee 8-da Maarij.
….La Soco Maalin Kale Iyo Wixii Dunida Soo Maray
Previous Post50 Tilmaamood Oo La Isku Raacay In Ay Haweenku Ragga Ku Doortaan, Gabadh Kastaana Jeceshahay In Ay Ka Hesho Mataankeeda Next PostBadhasaabka Gabiley Oo Qiray Quudhsigii Saylici Iyo Muuse Kala Kulmeen Liyuu Booliska & Xidhiidh Uu Falkan Kala Sameeyey Madaxweynaha Kililka